Soosaaraha noocyada caaga ah ee Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Meesha
Naqshadeynta & Noocyada
Alaabada balaastigga ah ee u baahan wax soo saarka caaryada, badiyaa waxaan sameynaa xoogaa jir ah nooc caag ahsi loo xaqiijiyo naqshadeeda. Waxay loola jeedaa hal ama dhowr nooc oo shaqeynaya oo loo sameeyay si waafaqsan muuqaalka muuqaalka sheyga ama qaab dhismeedka iyadoon la furin caaryada si loo hubiyo macquulnimada muuqaalka ama qaabdhismeedka. Nooca caaga ah ee meelo kala duwan ayaa sidoo kale loo yaqaannaa muunad caag ah, moodeel, mackup.
Nooca caaga ah waa hab muhiim ah oo lagu qiimeeyo naqshadeynta wax soo saarka iyo soo bandhigida alaabada. Waxay ku saleysan tahay sawir gacmeedka wax soo saarka, iyadoo la adeegsanayo farsamaynta qalabka mashiinka ama daaweynta laser-ka laydhka ama habka isku xidhka si loo soo saaro shaybaarro lagu qiimeynayo naqshadeynta iyo muujinta. Markii aan naqshadeynayno shey cusub, shay-baarka waxaa badanaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo muuqaalka sheyga ama sawirrada qaabdhismeedka si loo hubiyo muuqaalka ama qaab-dhismeedka caqli-galnimada ee qaab-hawleedka waxqabadka. Samaynta noocyadu waa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu wax ku oolka badan ee lagu xaqiijiyo nashqadeynta wax soo saarka iyo yareynta halista wax soo saarka.
Iyadoo ujeedadu tahay in la bixiyo habka ugu wax ku oolka badan ee lagu soo saari karo noocaaga iyo qalabkaaga, injineeradayada naqshadeynta waxay halkan u joogaan inay ku siiyaan naqshad adeeg soosaarid si loo hubiyo in badeecadaadu (s) ay had iyo jeer ku habboon yihiin soo saaraha wax soo saarka caagga ah. Iyada oo loo marayo falanqeyn dhammaystiran iyo xulasho gaar ah, waxaan xoojin karnaa kalsoonida mashruucaaga waxaanan bixin karnaa adeeg deg deg ah oo loogu talagalay in lagu bogaadiyo naqshadeynta- Tani waxay bixisaa fursado ku filan oo loogu talagalay baaritaanka shaqeynta taas oo muujin doonta wixii isbeddel ah ee suurtagal ah ee loo baahan yahay in lagu sameeyo naqshadeynta si ay ugu haboonaato shuruudahaaga suuqa. Tani waxay hubineysaa in arrimaha naqshadeynta alaabtu aysan gelin marxaladda dabagalka ee wax soo saarka caaryada, si looga fogaado guuldarrooyinka soo daahay iyo qashinka qiimaha badan. Badeecadaha waaweyn ee warshadaha, haddii ay yihiin alaab elektaroonig ah oo adag, qalabka korontada, gawaarida, qalabka caafimaadka, burushka cadayga, koobabka biyaha iyo waxyaabaha kale ee maalin kasta loo baahan yahay, ee ku jira heerka naqshadeynta wax soo saarka, muunadda noocooda waa in la sameeyaa si loo qiimeeyo loona xaqiijiyo suurtagalnimada farsamada, farsamada iyo dhinacyada suuqa, oo si joogto ah u hagaajiya naqshadeynta qaabeynta. Hel natiijooyinka ugu fiican.
Noocyada iyo adeegsiga noocyada caagga ah
1. Nooca muuqaalka: Bilowga marxaladda cusub ee naqshadeynta alaabta, samee muuqaalka muuqaalka si aad u qiimeyso oo aad u hagaajiso muuqaalka muuqaalka kala duwan ee badeecada, oo aad u xulato nidaamka muuqaalka ugu macquulsan uguna soo jiidashada badan macaamiisha.
2. Nooca qaabdhismeedka:Ka dib markii qaabeynta qaab-dhismeedka wax soo saarka la dhammaystiro, sida caadiga ah noocooda waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo qaabka naqshadeynta qaabdhismeedka ka hor soosaarka caaryada. Naqshadeeyuhu wuxuu hubiyaa nooca naqshada qaabdhismeedka si uu u helo cillada naqshadeynta kahor, iyo hagaajinta iyo hagaajinta naqshadeynta, si looga fogaado halista soo saarista.
3. Nooca shaqada: Iyada oo laga jawaabayo baahida macaamiisha ama baahiyaha dhiirrigelinta suuqa, noocooda hore ayaa loogu soo bandhigay suuqa iyo macaamiisha ka hor inta aan caaryada la samayn ama aan caaryadu dhammaystirnayn.
Muuqaalka / Nooca qaabdhismeedka
Waxaa jira shan teknoolojiyad waaweyn oo lagu sameeyo noocyada balaastigga ah sida soo socota
Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC
1. Mashiinka CNCNooca noocaas ah waxaa inta badan soo saarta xarun goynta. Iyadoo loo tixraacayo sawirka naqshadeynta badeecada, waxyaabaha aan loo baahnayn ayaa laga saarayaa faaruqinta balaastigga ah adoo goynaya aaladda mashiinka wax lagu jaro, waxaana la helayaa qaybaha u dhigma cabirka iyo qaabka. Ka dib markii la farsameeyo CNC, qaar ka mid ah farsamada gacanta ayaa guud ahaan loo baahan yahay.
--- Faa'iido: qaybo ayaa laga samayn karaa waxyaabo kala duwan iyadoo loo eegayo baahida; qaybaha la sameeyay waxay leeyihiin saxnaan wanaagsan, xoog iyo dhalanrog lahayn; fududahay in la helo tayo dusha ka wanaagsan, midabkeedu fududahay, koronto siinta iyo daabacaadda shaashadda. Ku habboon shay-baarka leh isku-dhafka isku-dhafka, qaybaha dhaqdhaqaaqa, qaybo waaweyn, qaybo leh muuqaal qurxan, iyo mashiinno shaqeynaya. Wakhtiga la bixinayo waa 7-8 maalmood. Waxay ku habboon tahay sameynta nooc muuqaal ah, nooc shaqo oo u eg iyo qaab dhismeed.
--- Qalabka: ABS, PC, POM, PMMA, nylon, iwm
--- Faa'iido daro: Faa'iido darrada ayaa ah baahida loo qabo qaddar go'an oo ah wax ka qabashada gacanta, qiime sare. Qaab dhismeedka oo sii murugsan, qiimaha ayaa sarreeya.
2. SLAama sawir-qaadista sawir-qaadista - Teknolojiyada SLA waxay ku adkeyneysaa hal lakab iyada oo la adeegsanayo iskaanka laysarka. Iyada oo loo marayo laydhka 'ultraviolet laser', sida ku cad qaybta iskutallaabta ee loogu talagalay lakabka asalka ah, laguna daaweynayo dhibic dhibic, dhibic ilaa xariiq, khad ilaa dusha sare, iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa kor u qaadista meertada, daabacaadda seddex-geesoodka ah ayaa lagu dhammeeyaa iyadoo lakab lagu dhejinayo lakabka . Nooca hore ayaa laga saaray haanta oo lagu xasiliyay hoosta laambada ultraviolet-ka. Waxay kuxirantahay kakanaanta, taariikhda dhalmada waxay noqon kartaa mid gaaban sida 2-3 maalmood.
Noocyada caaga ah ee SLA
3. SLSama shucaaca leysarka la xushay. Tani waxay ku lug leedahay dhismaha qaybaha laga helo xogta 3D iyadoo la isticmaalayo budada miraha iyo leysarka. Fasalka la isku duro ee jilitaanka ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo xoogaa waxqabad ah, oo ay ku jiraan qaybaha "laalaab la dhaqaajin karo". Taariikhda bixinta waxay noqon kartaa 2-3 maalmood, iyadoo kuxiran kakanaanta. Intii lagu gudajiray howsha sinjiga ee SLS, heerkulka walxaha budada ah (ama galka uu ku xiran yahay) ayaa hada soo gaadhay barta dhalaalka, oo si fiican uma qulquli karo oo wuxuu buuxin karaa farqiga u dhexeeya walxaha budada ah. Sidaa darteed, dusha sare ee qeybta waa dabacsan yahay oo qallafsan.
--- Faa'iidooyinka: Awood wanaagsan, oo aan si fudud loo beddelin, u adkaysiga saamaynta, ayaa u adkeysan kara miisaanka iyo qaddar cayiman oo qalabaynta ah. Waa fududahay in la isku xidho Iska caabinta daxalka. Waxay ku habboon tahay sameynta nooc ku-habboon qaab-dhismeed.
--- Waxyaabaha: Isticmaalka budada nylon, budada polycarbonate, acrylic polymer budada, polyetylen budada, budada nylon oo lagu qasay 50% kuul quraarad ah, elastomer polymer budada, dhoobada ama birta iyo budada wax lagu rido iyo qalabka kale, isbarbardhiga waxqabadka.
--- Faa'iido darrooyinka: saxsanaanta cabbirka iyo tayada dusha sare. Waxaa loo adeegsaday nooc qaabdhismeed qaab dhismeed tayo sare leh looma baahna.
4. Nooca Vacuum(Buuxinta Vacuum) Dib u soo saarista Vacuum waa hab loo sameeyo moodello yaryar oo dufcad ah. Waxay isticmaashaa noocii hore ee asalka ahaa (Nooca CNC ama noocooda SLA) si ay u sameyso caaryada silica ee faakiyuumka ah, waxayna u isticmaashaa qalabka PU in lagu shubo faakiyuumka, si loogu mideeyo nuqul la mid ah noocii asalka ahaa, kaasoo leh iska caabin kuleyl wanaagsan, xoog iyo adkeyn ka badan noocooda asalka ah. Haddii macaamiisha ay u baahan yihiin dhowr ama tobaneeyo nooc, waxay ku habboon tahay in loo isticmaalo habkan, taas oo si weyn u yareyneysa qiimaha.. Qalabku wuxuu bixin karaa noocyo kala duwan oo qalab jilitaan ah si loo gaaro qaar ka mid ah sifooyinka qaybaha wax taaj oo kale ee duritaanka. Taariikhda bixinta waxay noqon kartaa 7-10 maalmood, iyadoo kuxiran kakanaanta.
--- Faa'iidooyinka: Waa lagama maarmaan in la isticmaalo nidaamka CNC ama SLA si loo sameeyo sambal asal ah, kaas oo ku habboon dhowr nooc illaa tobaneeyo qaybood oo qaybo yar yar ah oo tijaabo ah. Xasiloonida cabbirka, xoogga iyo adkaanta ayaa ka sarreeya noocyada loo yaqaan 'SLA prototype', oo ku dhow noocooda 'CNC'. Waxay ku habboon tahay sameynta muuqaalka muuqaalka. Noocooda shaqeynaya iyo noocooda qaabdhismeedka.
--- Waxyaabaha: PU cusbi guud ahaan waa la isticmaalaa, laakiin sidoo kale waxay bixin kartaa qalab jilitaan oo kala duwan.
--- Faa'iido daro: Kuma haboona qaybaha leh qaab isku dhafan. Qiimuhu wuu ka hooseeyaa kan tijaabada CNC.
5. RIM (Reaction Injection Molding) sidoo kale waa adeegsiga asalka asalka ah (noocooda CNC ama noocooda SLA) oo ka samaysan caaryada silica, dareeraha laba-qaybood ee polyurethane PU ayaa lagu duraa caaryada degdegga ah ee heerkulka qolka iyo jawiga cadaadiska hooseeya, daaweynta iyo dhajinta -waxbarashada si loo helo shaybaarada balaastigga ah ee loo baahan yahay.
--- Faa'iidooyinka: Waxaa loo isticmaalaa isku-darka dufcadda yar ee alwaaxyada fudud iyo kuwa waaweyn iyo soo saaridda badeecado dhumuc weyn oo derbi adag leh oo aan isku mid ahayn. Waxay leedahay faa'iidooyinka waxtarka sare, wareegga wax soo saarka gaagaaban, habka fudud iyo kharash yar. - - Waxyaabaha: polyurethane PU oo ka kooban laba qaybood.
--- Faa'iido daro: Qalabka la isticmaalay waa mid keliya.
Daaweynta dusha noocooda ah: nadiifinta, rinjiyeynta, daabacaadda xariirta, qurxinta, korantada.
Nidaam kasta oo horudhac ah oo dhakhso ah ayaa ku siin kara noocyo kala duwan oo ah dhammaystirka caaryada iyo farsamooyinka ranjiyeynta, si loo abuuro muuqaal xirfad leh. Marxaladdan, injineeradeennu waxay kugula talin karaan ikhtiyaarrada qalabaynta noocyada degdegga ah si dhakhso leh si loogu gaaro wax soo saar bilic leh oo shaqeynaya. Adeeg hal-joogsi ah, waxaan ku siineynaa adeegyo taxane ah, sida nashqadeynta wax soo saarka, sameynta noocyada kala duwan, sameynta caaryada iyo cirbadeynta cirbadeynta, mashiinada, iyo isku imaatinka wax soo saarka. Waa mid ka mid ah howlaha lagu siinayo adiga shaybaar noocyo ah oo balaastig ah iyo qaybo bir ah. Wareegga wax soo saarkaaga, kaalmadeenna buuxda, waxaan ku hubin karnaa in badeecadaadu ay suuqa u soo galaan si buuxda oo shaqeynaya oo qiimo ku habboon leh.
Qiimaynta noocooda waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nashqadeynta wax soo saarka. Mestech sidoo kale waxay bixisaa naqshadeynta wax soo saarka, qalabaynta caaryada, wax lagu duubo caag ah iyo adeegyo wax soo saar si ay u sii taageeraan habka wax soo saarkaaga.
Hore: Daabacaadda Birta 3D
Xiga: Geedi socodka shubay dhinta
3d Daabacaadda caag ah
Nooca Cnc Caaga
Samaynta Nooca Caaga ah
Qaybo caag ah noocooda
Daabacaadda Birta 3D